သဒ္ဓါလှိုင်း: သစ္စာတရားကို ရှာဖွေခြင်း
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:40 AM
သစ္စာတရားဆိုတာ နှလုံးသားထဲမှာပဲ ရှိတာကလား ညီမရယ်...
သစ္စာမရှိတဲ့မင်း ကတိမတည်တဲ့လူတွေ ပေါများလာတဲ့
တွေ့နိုင်ပါအုံးမလားလို့ တွေးမိတယ် သဒ္ဓါရေ။
သစ္စာတရားဆိုတာ ခုခေတ်ခါတော့ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီထင်တာပဲ...။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ကြိုးစားပါ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို သိအောင်ကြိုးစားပါ၊
ဒီစာစုထဲကလို အနီးဆုံး ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ ရှိတဲ့အရာကို ပြန်မမြင်ဘဲ အဝေးကြီးလိုက်ရှာခဲ့မိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိခဲ့ကြမှာပဲ။ ဒီလိုစာစုမျိုးက သတိပေးရာ ရောက်စေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ကြိုးစားရင်း
ပို့စ်လေးဖတ်ပြိး အသိတွေဝေသွားတယ်မမရေ... ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါလို့..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ကြိုးစားပါ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို သိအောင်ကြိုးစားပါ၊ မင်းဟာ မင်းရဲ့စိတ်အတွင်းမှာ သစ္စာတရားရှိတယ်ဆိုတာကို မင်းကိုယ်မင်း မယုံကြည်ခဲ့ဘူး------------
ခုတော့ဖြင့် သစ္စာဆိုတာ ဘာလဲ ဖြစ်နေပြီနော်
ခုတော့ဖြစ် ရှာပါးပစ္စည်းလိုဖြစ်နေပါပြီ မသဒ္ဓါရေ
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး အတွေးလေးတွေ ထပ်ပွားမိတယ်... လူတွေက ကိုယ့်အနီးအနားက အရာတွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်ကြဘူး... အဲဒီအရာတွေကို ဆုံးရှုံးရတော့မှ နောင်တတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို မြင်ဖူးတယ်...
မဒါ။ ။ ။ လောကမှာ ရှားပါးလွန်းတဲ့ အရာ နှစ်ခု ရှိသတဲ့ . . . တစ်ခုက သစ္စာ တစ်ရားနဲ့ နောက်တစ်ခုက ဘုရားရှင်ပဲ တဲ့ ။
တကယ်တော့ အဝေးကြီးမှာ မဟုတ်ပဲ မိမိနဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါဘဲ။ လောကသစ္စာတရားအစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါစေ ညီမရေ...၊
"ငါတို့ဟာ ငါတို့နားမှာဘာရှိလဲ၊ ငါတို့ဘေးမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ မမြင်နိုင်တာ ငါတို့ဘဝမှာ အကြိမ်ပေါင်း များစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဟိုးအဝေးက သာယာတဲ့အသံလေးက ငါတို့ကို ဆွဲဆောင်တယ်၊ ဝေးလံတဲ့ စိတ်ကူး၊ အိပ်မက်တွေက ငါတို့ကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်" ...
အမှားနဲ့ အမှန်ရဲ့ကြားမှာ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးလိုပါတယ်.. ရေးထားတာလေးက နေ့တိုင်းဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ပြင်ပ လောကအတွက် အသိတရားတစ်ခုခုကိုရ စေမယ်လို့ မြင်ပါတယ်..
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးလေး . . .
သစ္စာတရားဆိုတာ စောင့်ထိန်းတတ်သူ အတွက် နဲ့ အသုံးချသူ အတွက်သာ ဖြစ်တည်နေတာပါ။
မမရဲ့ ပိုစ့်တိုင်းက အမြဲတမ်း တွေးစရာ တခုခုပေးတယ်..
မမက စာရေးကျဲပေမယ့် ရေးလိုက်တိုင်း အကောင်းဆုံးတွေချည်းပဲနော်..
ကိုယ့်အနားမှာ ကိုယ့်ဘေးမှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကို မမြင်နိုင်ခဲ့လို့လဲ သံသရာခရီးဆန့်ခဲ့ရတယ်ထင်တယ်.။ နောင်လဲဆန့်နေဦးမှာလားပဲ မသဒ္ဓါရေ...။
တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ မမရေ... သစ္စာဆိုတာ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ မဟုတ်ပဲ ရှာဖွေလေ ပျောက်ဆုံးလေ ဖြစ်နေသလို ပဲ မမ။
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာဖတ်တယ်။ ဒီတစ်ပြန်ဖတ်တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရာတော်ထဲကအတိုင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။
တစ်လံမျှရှိတဲ့ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းတွေရဲ့ အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီး အမှန်းတရားကိုရှာတဲ့ သူဟာ ရှာလေဝေးလေးပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို မူရင်းစာရေးသူဆိုလိုတာများလား ။